Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Mpilalao Football any Brezila Gabriel Martinelli Tantara Fahazazan-jaza sy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray fantatra amin'ny anarana hoe "Nelli". Ny tantaran'i Gabriel Martinelli Childhood Story Plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny Fiainana sy Fitiavan'i Gabriel Martinelli. Ny trosa Arsenal, FootballLondon ary Ny masoandro
Eny, fantatry ny rehetra fa iray amin'ireo tanora haingana indrindra izy izay vao hivoaka an'i Brezila tato ho ato. Na dia izany aza, vitsy ihany no mihevitra ny tantaram-piainan'i Gabriel Martinelli izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, ny anarany feno dia i Gabriel Teodoro Martinelli Silva. Gabriel Martinelli araka ny niantsoana azy matetika dia teraka tamin'ny andro faha-18 ny volana jona 2001 tamin'ny reniny, (anaran-ny fianakaviana: Silva) sy ny rainy Joao Martinelli ao Guarulhos, São Paulo, Brésil. Hita eto ambany ny sarin'ny ray aman-drenin'i Gabriel Martinelli izay mety ho tao anatin'ny 50 antonony tamin'ny fotoana nanoratana.
Hihaona amin'ny ray aman-dreny Gabriel Martinelli.- Andriamatoa sy Andriamatoa Joao Martinelli. Ny trosa amin'ny IG
Gabriel Martinelli dia avy amin'ny fianakaviany avy any Guarulhos. Tanànan'ny breziliana ary tanàna faharoa be mponina indrindra ao amin'ny fanjakana breziliana ao Sao Paulo. Fantatrao ve?… Izy koa dia namorona ny fianakaviany avy any Italia tamin'ny alàlan'i Joao Martinelli rainy.
Betsaka ny kintana amin'ny baolina kitra any Brezila dia mbola tsy niaina fiainana fatra-doha talohan'ny nahatongavany an-stardom ary i Gabriel Martinelli dia tsy hafa raha avy amin'ny fianakavian'ny fianakaviana iray tapaka na mahantra. Tahaka ny mpilalao baolina kitra sasany (ny tiana Roberto Fermino ary Gabriel Jesus), dia nampidirina tamin'ny tolona teny an-dalambe izy na dia mbola afaka nanonona ny anarany tsara aza izy. Ny fianakavian'i Gabriel Martinelli dia nipetraka iray amin'ireo faritra mahantra indrindra ao Guarulhos, ampahan'ny tanàna izay mahazo voninahitra fotsiny amin'ny famokarana zaza manan-talenta ao anatiny baolina kitra. Nandeha nilalao baolina kitra i Gabriel Martinelli fony izy zaza.
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Fanabeazana sy fanabeazana
Tamin'izy mbola kely, dia tsy nahaliana ny fianarany i Gabriel Martinelli ary nankafy hilalao baolina ihany. Noho ny fahatahorany fa lehibe ny fifaninanana amin'ny lalao baolina kitra miaraka amina vitsivitsy ihany no manao izany eo amin'ny tampony, ny ray aman-drenin'i Gabriel Martinelli dia tsy maintsy nitady safidy hanana ny zanany lahy hahazo fampianarana amin'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny fampianarana isan-tokantrano.
Ny fampianarana Gabriel Martinelli dia nanomboka tamin'ny futsal. Mitovy Philippe Coutinho teo alohany, ny fifehezana akaiky sy ny tongony haingana an'i Martinelli dia teraka tamin'ny nilalao futsal. Raha avy eo, ny saha eo an-toerana Guarulhos dia toy ny vilany mampihena ho an'ny tanora izay mivory isan-kariva mba hilalao baolina.
Ny kianjan'ny eo an-toerana Guarulhos- Teo no nanombohan'ny Football ho an'i Gabriel Martinelli. Sary: Ny masoandro
Gabriel Martinelli tamin'ny voalohany dia nahazo ny fitahian'ny ray aman-dreniny izay rehefa nandeha ny fotoana dia nanaisotra ny fisalasalany, nahafantatra fa nanana ny talenta izy ary afaka manao zavatra amin'ny baolina kitra. Amin'ny maha-mpangalatra lalana, i Martinelli dia nianatra ny varotra tamin'ny Futsal ho mandroso sy mihena.
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Avy amin'ny faha-sivifolo taonany dia nantsoin'ny Ekipa futsalianina izay nanasa azy hiatrika fitsarana. Martinelli nandresy ny fon'ny mpanazatra azy nandritra ny fotoam-pitsarana, seho izay nahita azy niditra niditra tao amin'ny ekipa. Vetivety dia naneho fahatsapana niaraka tamin'ny ekipan'ny Futsalianianina tany i Martinelli. Fantatrao ve?… Nahazo ny tanjona 66 tamin'ny Diviziona manokana an'ny Metropolitan Championship ary tanjona 56 hafa tao amin'ny State Gold Series - nanao ny tanjony amin'izao fotoana izao 122 amin'ny fitambarany.
Gabriel Martinelli Tany am-boalohany miaraka amin'i futsal. Miala amin'ny lalao miaraka amin'ny Tanjona 142. Sary: TowerHamlets
Avy amin'ny 2012, milalao baolina eo an-tsaha ary tsy i Futsal no lasa laharam-pahamehana azy. Talohan'ny nandaozany an'i futsal ho an'ny baolina kitra teny an-tsaha, Martin dia nanam-potoana fanampiny 20 nanao ny tanjona-142 tanjona. Miaraka amin'ny baolina kitra eo an-kianja, namoaka tanjona 63 i Martinelli. Amin'ny fotoana hahatratrarana tanjona 202 Korintiana, notsipihina izy ary nantsoina tamin'izany fotoana izany Ekipa faralahy breziliana Ituano FC ao anatin'ny 2015.
Raha tany Ituano FC dia nanohy nampisongadina ny mpanazatra sy ny mpankafy azy i Gabriel Martinelli. Fantatrao ve?... Satria tsara tokoa izy, ilay prodigy tanora izay nasehon'ny sary eto ambany, dia nanapaka ny firaketana ho lasa mpilalao tanora indrindra hanantona ny matihanina amin'ny Ituano, hira iray izay nahafantaran'ny mpankafy fa tena kintana izy amin'ny famoronana.
Ny fiainam-piandohan'ny fiainana ho an'i Gabriel Martinelli. Sary: FootballLondon
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Road to Fame Story
Hatramin'ny nanombohana, i Martinelli dia nanohy nampiseho fampanantenana be dia be tamin'ny fahazazana toy izany, izay nahasarika ny goavambe eropeana tamin'ny lalao (Man Utd, Barcelona, ​​Real Madrid). Fantatrao ve? Isan'ireo goavambe eropeana rehetra dia ny United States no nanatanteraka azy voalohany, nanasa azy hiatrika fitsapana. Nandritra ny fitsapana, i Gabriel Martinelli dia nilalao tamin'ny lafiny tanora ihany koa Mason Greenwood. Mampalahelo fa nandà azy i Manchester United na dia teo aza ny fitsapana efatra mba hahavariana azy ireo. Alohan'ny handaozany an'i Manchester hitady ahitra maitso. Paul Pogba nihaona tamin'ny breziliana nolavina. Amin'ny tenin'i Martinelli;
“Noho ny paoziko dia fantatr'i Pogba fa breziliana aho. Nanontany izy raha milamina daholo ny zava-drehetra sy izay toerana misy ahy. Notantaraiko taminy ny zava-nitranga rehetra avy eo, dia navelany hitondra sary miaraka aminy aho. Izy koa no niahy ahy tamin'ny fotoako teo ”
Gabriel Martinelli dia notronin'i Paul Pogba nandritra ny fotoam-pitsarana azy niaraka tamin'i United. bola: Ny masoandro
Taorian'ny fitsarana tsy nahomby niaraka tamin'i Manchester United, dia nanapa-kevitra ny hamela ny fiaran-dàlamby ihany i Gabriel Martinelli ao amin'ny akademisiana La Masia malaza any aminy mba hijery azy alohan'ny hanapahany hevitra hanasonia azy.
“Ny fiofanana niaraka tamin'i La Masia no iray amin'ireo traikefa tsara indrindra nananako tamin'ny baolina kitra. Ankoatry ny maha-akademisiana lehibe indrindra eto an-tany, avo dia avo ny haavon'ny fiofanana ary dia nampivoatra ahy betsaka tamin'ny lalao baolina kitra.”Hoy ​​i Martinelli indray mandeha.
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Mitsangàna amin'ny tantara
Mba hanaovana anarana lehibe sy hajaina bebe kokoa ho azy dia nanapa-kevitra ny hiverina any Brezila i Gabriel Martinelli, mitohy miaraka amin'ny klioba Ituano FC. Izany fotoana izany dia mila manao anarana ho azy dia tonga rehefa nisafidy ny handray anjara amin'ny sehatry ny Tompondakan'ny fanjakana São Paulo izy.
Fantatrao ve?… Nanomboka niroborobo i Gabriel Martinelli satria nanana ny fampisehoana nahavariana indrindra izy tamin'ny fifaninanana. Nanampy tamin'ny fitarihana an'i Ituano FC izy tamin'ny fandresena ireo dingana ho an'ny tarika ary nahatratra ny ampahefatry ny fisaorana noho ny tanjony mahavariana.
Gabriel Martinelli Mihaona amina Fame- Eto dia mankalaza tanjona any amin'ny Sao Paulo Tournament izy. Ny trosa any Football
Ny zava-bitan'i Gabriel Martinelli dia nahazo azy tany amin'ny toerana fanirian'ny ekipa nasionalin'ny Copa América talohan'ny Copa América tamin'ny Mey 2019. Inona no dikan'ity?. Midika izany fa izy no voafidy hiofana ho eo anilan'ireo izay tiany Neymar, Coutinho ary ny sisa amin'ny mpilalao senior breziliana.
Nandray anjara koa tao amin'ny Campeonato Paulista AKA Paulistão (ny ligy baolina kitra matihanina amin'ny sidina baolina kitra any amin'ny fanjakana Breziliana São Paulo) lasa fiovana iray hafa teo amin'ny asan'ny tanora tanora. Fantatrao ve?… Taorian'ny fanolanana ny fifaninanana dia noraisin'i Gabriel Martinelli ny loka 3 mahatalanjona amn'ny ligy Paulistão mahatalanjona dia: (Campeonato Paulista Mpikambana Vaovao, Mpilalao an-tserasera mandritra ny taona ary ekipa amin'ny taona na 2019).
Lalan'i Gabriel Martinelli amin'ny tantara malaza- Ny loka Paulista 2019 Lalao. Ny trosa amin'ny Twitter
Na dia mbola tanora aza i Martinelli dia nanao anarana ho azy tao amin'ny fireneny. Taorian'ny fizarana mari-pankasitrahana dia lasa nahaliana azy avy amin'ny klioba ambony 25 maneran-tany izay nanomboka nangataka sonia. Amin'ireo klioba rehetra dia i Arsenal no nanao sonia voalohany hahatanteraka ny faniriany. Nandritra ny nahatongavany tany Arsenal, ny tanora prodigy tanora dia nanana fotoana hihaonana tamin'ny sasany amin'ireo maherifony.
"Noraisina tamin'ny fomba faran'izay tsara aho. Rehefa tena tanora aho dia menatra kely. Hitako ireo mpilalao izay tsy azoko natao afa-tsy tamin'ny fahitalavitra sy PlayStation. Nandray tsara ahy izy rehetra ary nahatsiaro ahy tao an-trano”Nanampy koa izy taorian'ny nidirany an'i Arsenal.
Nandray ny dingana voalohany nataony i Gabriel Martinelli tamin'ny fanatontosana ny tanjany tamin'ny alàlan'ny fidirana tokana mahavariana manohitra ny Nottingham Forest. Taorian'ny maherifon'ny fiadiana ny Tompony Carabao dia nahatratra isa roa koa izy tamin'ny lalana 4-0 Standard Liege ao amin'ny Ligy Europa. Jereo eto ambany porofo horonantsary (Kredit amin'ny AFCVN Ofisialy).
Raha ny marina, dia misy tanjona mivelatra eo aminy na dia efa taona mahery aza izy. Tsy isalasalana fa ny mpankafy Arsenal dia mety hahita ny tanora iray mamelana ho talenta sokajy eran'izao tontolo izao. Ny ambiny, hoy isika, dia tantara ankehitriny.
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Relationship Life
Miakatra ny lazany sy ny fahatongavany any Londres, azo antoka fa maro amin'ireo mpankafy Arsenal sy breziliana no tsy maintsy nanontany tena raha manana sipa i Gabriel Martinelli. Ny fahamarinana dia; izy dia efa azony. ary ao ambadiky ny mpilalao baolina mahomby dia misy tovovavy tsara tarehy izay mandeha amin'ny anarany Rachel Akemy.
Hihaona amin'ny tovovavy saka- n'i Gabriel Martinelli- Rachel Akemy. Ny trosa amin'ny IG
Vao herintaona taorian'ny nidirany an'i Arsenal dia nanao dingana sahy i Gabriel Martinelli rehefa nanao ny fanoloran-tena hanambady (hiseraserana) ny sipany izy. Toy izany no nalain'ny sampiny Philippe Coutinho izay efa nanambady sy nanambady ny sipa tamin'ny mbola kely.
Na i Rachel Akemy sy i Gabriel Martinelli dia tsy manadino velively ny maka sary azy ireo rehefa mitsidika ny toeran-tany any ivelany izy ireo. Ny tetezana London Tower dia one amin'ny mpivady tian'ireo mpivady indrindra mandritra ny fotoam-pialany.
Gabriel Martinelli sy sakaizan-jaza ao amin'ny tetezan'i Tower London. Ny trosa amin'ny IG
Rehefa mitsara ny fomba samy mandeha amin'ny fifandraisan'izy ireo dia toa ny fanambadiana no mety ho manaraka amin'ny dingana voalohany.
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Fiainana manokana
Hanampy anao hahazo sary tsara kokoa ny toetrany ny hahafantaranao an'i Gabriel Martinelli Personal Life.
Gabriel Martinelli Fiainana manokana. Credit any Instagram
Manomboka, mpiady miasa i Gabriel Martinelli. Izy dia olona miaina fiainana tapa-kevitra sy tapa-kevitra na dia eo aza ny fomba tony sy malefaka. Raha jerena ny fijery, tena somary antitra kokoa i Martinelli noho ny herim-pony sy ny fahaizany mampifanaraka amin'ny zavatra entin'ny fiainana.
Martinelli izay 18 tamin'ny fotoana nanoratana dia tena maniry mafy ny fiainam-pitiavany. Tsy matahotra mihitsy izy hampahafantatra ny besinimaro amin'ny sakaizany tahaka ny faniriana mpilalao baolina hafa tamin'ny fahatanorany. Io no tena toetran'ny fahatokian-tenany sy ny fahatokiany.
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Martinelli izay lasa mofomamy amin'ny fianakaviany amin'ny alalan'ny fahavononany dia nanamboatra ny lalan'ny fianakaviany mankany amin'ny fahaleovan-tena ara-bola isaorana rehetra noho ny baolina kitra. Ny fananana mpianakavy mahomby izay nanao azy tamin'ny baolina kitra dia nahatonga ny olon-drehetra ao an-tranony ho akaiky sy nifandray tamin'ny lalao baolina kitra.
Ao anatin'ity horonantsary etsy ambany ity, ny fianakavian'i Gabriel Martinelli anisan'izany ny rahalahiny (havany), ny rahavavin'ny dadatoany ary ny nenito dia samy mankalaza ao anaty efitranony kely rehefa avy nijery azy tamin'ny isa tamin'ny Arsenal izy. Ny trosa Ny masoandro.
Momba ny Rain'i Gabriel Martinelli: Joao Martinelli dia Breziliana manana ny endriny italiana noho ny an'i Martinelli Dadabe. Izany dia mendrika ny zanany lahy Gabriel Martinelli amin'ny fahazoana pasipaoro italiana ary koa miantoka ny toerana misy ny hoavin'ny ekipam-pirenena italiana. Raha jerena eto ambany dia misy ny fitoviana manaitra eo amin'ny ray sy ny zanany lahy.
Hihaona amin'ny Rain'i Gabriel Martinelli. Credit any Instagram
Momba ny Renin'i Gabriel Martinelli: Kely no fantatra momba azy. Na izany aza dia fantatra fa niteraka ny anarana hoe 'Silva' izy alohan'ny hanambadiana an'i Joao vadiny. Raha mitsara avy amin'ny horonantsary etsy ambony dia hita ny renin'i Gabriel Martinelli tamin'ny fotoana nanoratana dia mbola mipetraka any Brezila miaraka amin'ny fianakavian'i Martinelli.
Hihaona amin'ny Renin'i Gabriel Martinelli. Credit any Instagram
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Lifestyle
Mahafantatra ny fiainany manokana ny Asides, ny fahafantaranao ny fomba niainan'i Gabriel Martinelli, dia hanampy anao hahazo sary feno kokoa momba ny toetrany.
Noho ny fitaizana azy dia nanana fototra mafy tokoa i Gabriel Martinelli amin'ny fitazonana ny vola ara-bola sy mandamina. Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana dia tsy misy marika an'i Martinelli miaina ny fomba fiaina mahafinaritra iray izay mora taitra amin'ny alàlan'ny goavambe iray sy ny trano lafo vidy.
Gabriel Martinelli Zava-iainana Fantatra - nohazavaina. Credit any GlobeFreak sy Instagram
Ny fahafahan'i Martinelli dia manome fanampiana ara-bola ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviany dia mitovy amin'ny fanolorantena napetrany tao anaty kianja.
Gabriel Martinelli Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Untold Facts
fivavahana: Gabriel Martinelli dia notezaina avy tao amin'ny trano fivavahana kristiana, nanatrika ny diosezy katolika romana Guarulhos tamin'ny fahazazany. Tsy manafina ny tsy fisaorana an'Andriamanitra izy mandritra ny fankalazana ny tanjony.
Ny 911 Attacks dia niseho tamin'ny taona nahaterahany: Fantatrao ve?… Ny 3% amin'ireo mpampiasa Internet ihany no nahazo vaovao momba ny fanafihana 9 / 11 avy amin'ny tranonkala. Tamin'ny volana septambra 11 2001, nisy fiaramanidina amerikanina roa nanao fiadiana tany amin'ny tilikambo kambana tao amin'ny Ivotoerana Ara-barotra eran-tany tany New York izay nahalavo azy.
Nisy horohoron-tany nitranga tamin'ny taona nahaterahany: Eo amin'ny lalan'ny loza, horohoron-tany mirefy 7.9 amin'ny maridrefy Richer nandona an'i Gujarat any India tamin'ny Janoary 26, namono olona farafaharatsiny 20,000 ary nandratra ny 167,000.
Navoakan'ny Technologies manan-danja ny taona nahaterahany: Tamin'ny Janoary 13, 2001, Wikipedia.org dia tonga tety an-tserasera. Tamin'ny volana Jolay 2001, ny Google dia nandefa ny "Image Search" izay nahatonga ny mpampiasa hiditra amin'ny sary 250 tapitrisa. Ary farany tamin'ny Novambra 15, namoaka ny fampiononana kilalao horonantsary Xbox.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namakiana ny tantaranay momba ny zaza zazalahy Gabriel Martinelli ary Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.